Tsimbalivaly ny fiainana !
Fihemoran’ny tanàna, taratry ny firenena tsy mandroso !
Satria manano-sarotra ny fanapariahana ny gazety Lakroa (Lakroan’i Madagasikara) sy famarotana azy (any amin'ny paroasy no maro amintsika mpamaky Lakroa) dia eto amin’ny tranonkala no hamoahana ireo lahatsoratra tokony ho novakianao tao amin’ny laharana mivoaka ny alahady 30 aogositra izao, laharana 4196
Avy aiza ny famonjena ?
Efa dila ny omaly, ny ampitso tsy mbola fantatra !
Resaka vola ilay raha !
« Miverena ry taranak’i Adama » (sal 89,3b)